Wararka Maanta: Sabti, Jun 2 , 2012-Qodobbadii ugu muhiimsanaa ee kasoo baxay shirkii Istanbuul II ee looga hadlayay Mustaqbalka Soomaaliya
Haddaba qodobbadii ugu muhiimsanaa ee shirkaas kasoo baxay ayaa waxay kala ahaayeen sidan:
-In la tixgeliyo madaxbanaanida, sharafta iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed.
-In nabad dhab ah laga sameeyo Soomaaliya; iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay raadinayaan dib u heshiisiin, nabadeyn iyo xiriir siyaasadeed si loo helo dowlad joogto ah oo Soomaaliya meteli karta.
-In beesha caalamka ay rajo-wanaagsan u yeeshay waxqabadkii DKMG ah, sanadkii lasoo dhaafay oo marxaladdo adag lagu shaqeynayay isla markaana horumar laga sameeyey dhinacyada ammaanka, siyaasadda, bani'aadannimada iyo dib u heshiisiinta.
-In mas'uuliyadda koowaad ay noqoto sidii xal loogu heli lahaa Soomaaliya iyadoo ay beesha caalamku taageerayso.
-In la xasuusto shirkii London oo aad iyo aad muhiim u ahaa arrimmo badanna lagu gaaray.
-In lasoo afjaro xiliga KMG ah 20-ka Ogoosto, 2012; sida ku cad heshiiskii Kampala, Roadmap-ka iyo heshiisyadii Garoowe iyo Addis Ababa.
-In beesha caalamku ay si deg-deg ah u fuliyaan dhammaan ballanqaadyadii ay horay u ballan-qaadeen si loo helo markii odayaasha dhaqanku ay Muqdisho ku laabtaan ay soo xulaan ergadii ansixin lahayd dastuurka una soo xuli lahaayeen baarlamaanka cusub.
-In Soomaalida lagu amaano sida ay u ilaalinayaan xuquuqda haweenka ayadoo golaha ansixintana 30%haween ay yihiin.
-In shirka Istanbuul uu soo dhaweynayo inay si KMG ah loo ansixiyo dastuurka cusub.
-In shirka Istanbuul uu taageero in shacbiga Soomaaliyeed laga talogeliyo dastuurka iyagana ay xaq u leeyihiin.
-In baarlamaanka cusub ee Soomaaliya uu noqdo mid loosoo xulo si cad oo aanu mugdi ku jirin.
-In doorashada madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka aanay ka dib marin waqtigooda.
-In la taageero go’aankii bishii May kasoo baxay ururrada IGAD, AU iyo Qaramada Midoobay ee ahaa in ciddii ka hortimaadda hannaanka hadda socda loo aqoonsan doono qaswadayaal; iyadoo la isku raacay in kooxahaas laga qaado tallaabo adag.
-In beesha caalamka looga baahan yahay inay taageeraan qabsoomida wadahadal dhexmara DKMG ah iyo Somaliland.
-In siyaasadda cusub ee hay’adaha lasoo dhisayo loo baahan yahay inay noqoto mid Soomaalida oo dhan wada meteli kara.
-In la tixgeliyo arrimaha xuquuqul aadanaha; iyadoo Soomaalidana laga doonayo inay texgeliyaan dhowridda xuquuqda aadanaha.
-In la helo dib-u-heshiisiin dhab ah oo Soomaalida dhexdeeda ah, dadkuna is cafiyaan; sida dalal badan oo caalamka ah ka dhacday.
-Waa inay bilaabataa wixii ka dambeeya bisha Ogoosto barnaamijyo cusub oo dib loogu soo celinayo dhismaha hay’adaha dowliga; taasoo laga ambaqaadayo qodobada ku xusan Roadmap-ka.
-In lasoo celiyo dib u dhiskii dalka iyadoo dhammaan hay’adaha ammaanka loo helayo tashiilaadka ay u baahan yihiiin lana xoojiyo.
-In xaga tababarrada laga taageero ciidammada Soomaaliya sida ay hadda bilowday dowladda Turkiga.
-In AMISOM lagu amaano howlaha xaga amniga ah ee ay kawaddo Soomaaliya iyo sido kale dowladihii saaciday oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Midowga Yurub.
-In dowladihii horey ugu balan-qaaday Soomaaliya inay u soo diraan si ay uga mid noqdaan AMISOM, si deg-deg loogu dhameystiro howlaha harsan.
-In laga hortago dhammaan wixii keeni kara carqalad.
-In dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamku ay noqdaan kuwo kawada shaqeeya xoojinta hay’adaha amniga.
-In la dhiso ama dib u habeyn lagu sameeyo hay’adihii sharciga sida maxkamadihii.
-Shirku wuxuu si Wadajir uga soo horjeesanayaa falalka argigixisanimo, dagaallada iyo xuquuqul insaanka oo lagu tunto; wuxuuna dhiirri-gelinayaa sidii arrimahaas oo dhan looga soo horjeesan lahaa.
-Shirku wuxuu cambaareynayaa in carruurta loo adeegsado dagaallada; iyadoo la askareeynayo
-Shirku wuxuu u arkaa la-dagaalanka burcadbadeedda xalka guud iyadoo lagala dagaalamayo dhinaca berriga.
-In Soomaalidu ay si guud uga wada-shaqeeyso xasilinta iyadoo laga hortagayo in Al-Shabaab iyo Al-Qaacida fursad loo siiyo inay kusoo laabtaan deegaannadii laga saaray.
-Shirku wuxuu ku ammaanay dowladda hirgelinta maamullada deegaannadii laga saaray Al-Shabaab, iyadoo beesha caalamkuna ay arrimahaasi taageereyso.
-In beesha caalamku ay tixgeliso habab amni loogu sameyn karo goobahaas laga saaray Al-shabaab, si hannaanka maamul uu u sii shaqeeyo.
-In la sameeyo sanduuq dhaqaale oo sii dedejiya fulinta howlahan, ayna caalamku si wadajir ah uga qeyb-qaataan arrimahan taasoo loo arko mid ka duwan sidii horay uu caalamku ugu taageeri jiray Soomaaliya.
-In loo baahan yahay in lasii wado gargaarka la siinayo dadka barakacayaasha ah.
-In la aqoonsado inay Soomaaliya hadda galeyso marxalad cusub oo kasoo kabashada dhinaca dhaqaalaha ah; loona baahan yahay in lagu taageero oo lagu garab-galo.
-In xoogga la saaro dib u dhiska dalka iyadoo si gaar ah looga soo kabanayo burburkii dagaallada sokeeye; gaar ahaan guryaha ku yaala caasimadda.
-In la hirgeliyo mashaariic biyo-gelin ah taasoo qeyb ka ah mashaariicda algu horumarinayo Soomaaliya.
-In dowladda iyo hay’adaha gaarka ay iska kaashadaan xagga maal-gelinta iyo horumarinta howlaha.
-In shirkan uu soo dhaweynayo wadahadalada socda ee lagu sameynayo hay’ad dhaqaalle oo kawada dhaxeysa dowladda iyo caalamka iyadoo wadahadalladaasna si deg-deg ah loosoo dhaweynayo.
-In shirka iyo beesha caalamku ay taageerayaan sidii Soomaalida ay dhaqaalahooda u maamulan lahaayeen.